Ny famokarana divay mahazatra indrindra any Etazonia
Ny lisitr'ireo tanimbary any Etazonia izay miha-feno na voafetra ny famokarana divay biolojika sy dipoavatra maharitra dia mihamitombo hatrany. Fotoana mampientanentana ho mpamokatra divay ary eto izahay mba hampiseho ireo olona izay mitarika.
Ny morontsiraka Andrefana no morontsiraka tsara indrindra, sa tsy izany? Amin'izao, ny valiny dia eny. Kalifornia dia mpanjaka tsy vitan'ny famokarana manontolo (90 isan-jaton'ny famokarana divay amerikana), izy ireo koa no mamokatra divay be mpihinana. Tonga any amin'ny toerana fahefatra i Kalifornia, any Italia, Frantsa ary Espaina ho an'ny ankamaroan'ny famokarana divay eto amin'izao tontolo izao. Mora ny mahita ny fomba fandraisan'ny governemanta Golden ny ankamaroan'ny volamena (na amin'ity tranga ity, "maitso"), rehefa tonga amin'ny loka nahazoany loka izy ireo.
Na izany aza, ny firenena 50 rehetra any Etazonia dia manana karazana fambolena. Tamin'ny fotoana iray, i Kentucky dia namokatra mihoatra ny 50% ny voaloboka sy ny divay. Raha mbola miasa ny sisa amin'ny firenena mba hitazonana an'i Californie, dia misy divay maromaro milaza fa mamokatra fanjakana any ivelan'ny morontsiraka andrefana. Indiana, Colorado, Texas, ary Missouri dia samy mihazona ny filazany.
Toeram-pisakafoanana manodidina: Napa, Californie
Round Pond Estate dia tompon'antoka ary natsangan'ny fianakavian'ny MacDonnell faharoa, ary izy manokana dia i Cabernet Sauvignon renivohitra, oliva oliva virjina virjiny, divay mena, siramamy siramamy vita amin'ny siramamy ary tanana an-tselatra ny zavatra niainan'ny vahiny. Mampirisika ny fahasalamana ara-boajanahary izy ireo ary hampihena ny fampiasana ny simika. Ny orinasa dia mihevitra ny hanome ny fepetra amin'ny asa ho an'ireo tantsaha sy mpiasa izay manangom-bokatra ary mahafa-po ny fomba fambolena fambolena.
"Tsy misy dikany ny mendrika." Ity no teny filamatra neken'i Barney Fetzer rehefa nanomboka nanamboatra divay nahafinaritra tany an-tanindrazana izy tamin'ny taona 1968. Fannter tsy manam-pahaizana manokana ny fetzer satria tsy ny fampiroboroboana ny fambolena ihany no ao anatin'io fitsipika io. Ny orinasa dia mikendry ny ho tsara kokoa amin'ny taona 2030. Amin'ny alàlan'ny angovo madio, ny fambolena ny fambolena, ny fihenan'ny gaza fitrandrahana, ary ny zero-waste dia eo am-piandohana mba hahatratrarana ity tanjona mendri-kaja ity. Manana mari-pahaizana maromaro sy mari-pankasitrahana ho an'ny fiarovana ny finday ary tsy ela dia nanjary ny lehibe indrindra amin'ny varotra B Corp eto amin'izao tontolo izao sy ny seranan-tsambo manana mari-pahaizana manokana any Kalifornia.
Ny toeram-pisakafoanana any amin'ny toeram-pambolena fiompy Stoller
Oregon dia kintana mihamitombo ao amin'ny tontolo divay ary ny Stoller dia anisan'ny misaotra noho izany. Ny toeram-ponenana no toeram-pivarotana lehibe voalohany teto amin'izao tontolo izao ho lasa LEED voamarina. Izy ireo ihany koa no voalohany namokatra angovo avy amin'ny masoandro tao amin'ny faritra. Ny orinasa dia LIVE, ary ny CNC marihina ary ny tranokalan'ny Salmon Safe. Mampiasa ny famokarana herinaratra izy ireo izay mampihena ny filanjana sy ny fitomboan'ny angovo.
Eny, ireo Coppolas. Tsy vitan'ny hoe manao sarimihetsika manokana izy ireo, fa manamboatra divay miavaka ihany koa. Nahazo ny loka Green Green 2017 ho an'ny Mpitarika izy ireo tamin'ny fananganana ny fanoloran-tena hanangona voankazo voalanjalanja maharitra 100% amin'ny taona 2019. Ny hetsika hafa mahavariana azony dia ny fandaharan'asam-pambolena voaloboka sy ny fanoloran-tena amin'ny andraikitra ara-tsosialy.
Manana tendrombohitra maitso maitso i Vermont. Manana fomba fanao maitso izy ireo! Ny tanimboalobok'i Shelburne dia manonona ny voalobony eo an-toerana ary manolo-tena hanaraka ny fanolorana "Vine Balance" ny Cornell University. Ny efitrano famafazana dia LEED-certified ary ny vokatra ao an-trano rehetra dia voafidy amin'ny faharetana ao an-tsaina.
Tsy mila mandeha lavitra ny New Yorkers mba hankafy ny bitro, divay organika. Hopotehina amin'ny LIRR mankany amin'ny 12 hektara Leib Cellars. Fambolena voajanahary, 100% voankazo voajanahary ary ekipa mpamboly tanora mavitrika no mahatonga ity fivarotan-tsolika ity NY. Ny WSJwine dia nanonona ny Pinot Blanc 2013 Reserve tao amin'ny "Top 12 divay tao Amerika".
Sampan-tsolika: San Antonio, Texas
Ny Hill Country, Texas dia fantatra noho ny tsy fisian'ny bisikileta, ny faritra mamokatra divay tsara indrindra any Texas. Ny sampana fanoherana dia nahazo ny 2017 "Top Texas Winery" avy amin'ny San Antonio Express. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny Texas terroir, fomba fanao mahazatra, ary ny fikarakarana ara-tsosialy, ity fivarotam-bokatra ity dia tokony hitandrina. Ireo tompona Bob sy Brenda Davis dia samy manana ny lanjany eo amin'ny lalao maharitra ary miezaka ny ho lohalaharana eo amin'ny fampiroboroboana ny faritra amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia fanandramana tahaka ny saignée sy ny fanitarana ny fako.
Ny fialan-tsasatra Eoropeana tsara indrindra izay tsy noraisinao
Gazety Torolàlana momba ny fitetezam-bahoaka sy ny kolontsaina ary ny politika
The 5 Best Winter Rides in New Hampshire
Oviana no andron'ny Patriots?
The 5 Best Ski Ski Après any New York State
Ny toetr'andro maraina any atsimo atsinanan'i Etazonia
Guide Review- Cèsar A. Lara, MD Center for Management
Ahoana ny fomba hahazoanao lisansa momba ny Fishing Fishing
Centre Center for the Performing Arts
Fomba fiasan-dalana iray any Etazonia
Aiza no ahitana fitetezana fiara, fitaovana ary fitaovana
17 Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina
Toerana tsara indrindra handehanana any Ice Skating any Alemaina
Ahoana no hialana amin'ny Lisbonne mankany Coimbra, Portugal
Torohevitra ho an'ny Fitetezam-paritany New York City
Lisitry ny Volkano Amerika Afovoany
Ny fisakafoanana tsara indrindra any Tel Aviv
The 5 Best New York City Cruises